Madaxweynaha Mareykanka uu digniin u direy dhigiisa Russia – Puntland Post
Posted on June 10, 2021 June 10, 2021 by News Office
Madaxweynaha Mareykanka uu digniin u direy dhigiisa Russia
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa dalka Britain ka bilaabay safarkiisa ugu horeeyay tan iyo markii uu xafiiska yimid, waxaana Russia uga digay in ay cawaaqib xun la kulmi doonto haddii ay la timaaddo ficilo aan loo baahneyn.
Mr Biden ayaa la yimid rabitaan ah in uu xoojinayo xiriirka xulafada Mareykanka ee xumaaday xilligii maamulkii Trump. Isagoo ka hadlayay saldhiga ciidanka cirka ee Suffolk, arbacadii waxaa uu fariin cad u direy madaxweyne Putin.
Safarka sideeda maalin ah ee madaxweynaha uu ku joogi doono Yurub, waxaa uu ka qeybgali doonaa shirka dalalka hodanka ah ee G7, sidoo kale waxaa magaalada Geneva kula kulmi doonaa madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin.
Kulanka Biden iyo Putin ayaa looga hadli doonaa arrimo ay kamid yihiin, xakameynta hubka, isbedelka cimilada, ciidanka Russia uu jooga dalka Ukraine, weerarada dhanka computerada iyo xariga hogaamiyaha mucaaradka Russia ee Alexei Navalny.